PressReader - Isolezwe: 2018-11-09 - Lubhuntshile ukhetho eNdumeni
Lubhuntshile ukhetho eNdumeni
Isolezwe - 2018-11-09 - IZINDABA - INTATHELI YESOLEZWE
KUBHUNTSHE uhlelo lokukhethwa kweMeya noSomlomo kuMasipala waseNdumeni, KwaZuluNatal ngenxa yokuvuka indlobane kwabaholi be-IFP besiyingi namanye amakhansela abebekhononda ngokuthi iqembu labo lizobafunza abantu abangabazi elifuna babafake kulezi zikhundla.
Abaholi abebejutshwe ukuzoqapha isimo be-IFP, uMnuz Nhlanhla Msimango noMnuz Xolani Ngwezi batshelwe emehlweni ukuthi akekho ozobalalela ngoba beze ngomqondo woqhekeko nokubukela phansi ubuholi besiyingi obusanda kukhethwa.
Kwale ngisho amakhansela e-IFP esebizelwa kwikhokhasi nguMsimango ngaphandle kwebhilidi laseNdumeni obekuhlanganelwe kulo kodwa amanye athi awalubeki futhi awazile ukuzolalela imihlangano eyinguyazana angayazi.
Okucasule amanye amakhansela namalungu eqembu kube ukuthi iqembu libafunza ukuthi bakhethe bani kwesobumeya abathi kwenziwa ngaphandle kokuxhumana nabo.
“Sesiyabona ukuthi abaholi be-IFP basithatha kancane. Bacabanga ukuthi bazosebenzisa iNdumeni ukuphusha izinhloso zabo zamaTripple K lawa afuna ukuxosha wonke umuntu eqenjini ukuze asale ekhethana wodwa mhla kwafika ingqungquthela yokukhetha ubuholi obusha. Namanje babukela phansi ubuholi besiyingi saseNdumeni namakhansela akhona. Ihlazo elinye nje elivelile wukuthi ngisho igama likaSomlomo ohambile, uNkk Bongiwe Mbatha Makhathini namanje alisuliwe kwa-IEC kodwa bekuthiwa kuzovalwa nesikhala sakhe. Besizoba khombisa ngoba besifuna amakhansela wonke avele avote ne-ANC imane iwuthathe lo mkhandlu,”kusho ikhansela elingathandanga ukudalulwa.
Umxhumanisi weqembu eNdumeni, uMnuz Xolani Msezane uthe kuyiqiniso ukuthi abeneme neze ngokwenzekile ngoba bayabona ukuthi ubuholi abukafuni namanje ukubahlonipha njengesigungu esisha.
Uthe bekumele kukhethwe kodwa ukungenami kwamalungu eqembu namanye amakhansela kwenze kwagcina kungasakhethwanga.
Uthe abakuzwile ngoMsimango wukuthi kumele bonke bathutheleke eThekwini ukuyobonana nobuholi obuphezulu ngale nkinga.
UMsimango uthe kuyiqiniso ukuthi umkhandlu awuzange usahlala ngenxa yezinkinga ezithile.
“Okunye kube ukuthi amakhansela abengaphelele okwenze isibalo sangahlangana ukuze umkhandlu ukwazi ukukhetha. Nokho sisazoqoqa wonke umbiko ukuze siwuhambise esigungwini esiphezulu ngakho konke okwenzekile,” kusho uMsimango.
Selokhu kuqale izinkinga eNdumeni abaholi be-IFP abaphezulu abamukelwa kahle njengoba bethukwa njalo uma befikile kanti bahamba bengasayifisi indaba ngenxa yoqhekeko olunye oluyamaniswa nengqungquthela kazwelonke egcine ihlehlile.
Lokhu sekube nomthelela kumasipala waseNdumeni nowaseNquthu nakhona okuvela ukuthi akusebenzeki ezikhulwini zakhona.